Fantaro ireo kandidà ho filoham-pirenen’i Nizeria amin’ity taona 2019 ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2019 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Yorùbá, русский, polski, Français, Swahili, English
Ireo kandidà ho filoham-pirenena nizeriana taona 2019 [Tambatambatra nataon'i Nwachukwu Egbunike].
Hanatontosa fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny 16 febroary 2019 ho avy izao ny firenena be mponina indrindra eto Afrika, izay tsy iza fa i Nizeria. Na dia eo ho eo amin'ny 35 eo aza ny isan'ny kandidà ho filoham-pirenena, dia mpifaninana sy kandidà roa avy amin'ny lazaina ho “hery fahatelo”, vondron'ireo misandratra izay somary vaovao ihany eo amin'ny politika nizeriana, no hita misongadina amin'ity hazakazaka ho any Aso Rock — toerana misy ny lapan'ny filoham-pirenena ao Nizeria — ity.
Mazava loatra fa hametraka ny kandidàny ireo antoko nizeriana roa lehibe indrindra, ny All Progressive Congress [APC na Kongresin'ny Liam-Pandrosoana Rehetra] sy ny Peoples Democratic Party [PDP na Antoko Demaokraty Entim-Bahoaka]:
Muhammad Buhari, filohan'i Nizeria. Creative Commons.
Kandidàn'ny APC izay mitondra amin'izao fotoana izao, nandresy tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena i Buhari tamin'ny taona 2011 rehefa resiny ny filoha teo aloha Goodluck Jonathan. Ny nahazoan'i Buhari ny fahefana dia mifototra amin'ny fahadiovam-pisainany sy ny hita ho fahafahany mampilefitra ny kolikoly sy ny tolona mitam-piadiana ataon'ny Boko Haram. Saingy tao anatin'ny fehim-potoana niasany no nitohizan'ny tsi-filaminan'i Nizeria noho ny fifanandrinan'ny tantsaha niadian'ny mpiompy sy ny mpamboly noho ny fifindran'ny mpiompy avy any avaratra nianatsimo mitady tany azo asaina. Vaky rà ihany koa ny zon'olombelona nandritra ny fitondrany, satria nahatratra ny ambara ambony indrindra ao amin'ny governemanta ny tsi-fisaziana sy ny kolikoly.
Atiku Abubakar [Sary avy amin'ny vohikalam-panentanana].
Abubakar no filoha lefitra teo aloha sady kandidàn'ny PDP. Efa niezaka ny handesy izy tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena teo aloha saingy mbola tsy nahomby. Na izany aza, nahazo tosika matanjaka ny fanentanana nataony noho ny famitranam-pihavanana nifanaovany amin'ny lehibeny, ny filoha teo aloha Olusegun Obasanjo — izay namariparitra ny fitondran'i Buhari ho governemanta tsy nahomby. Tamin'ny naha-filoha lefitra azy i Abubakar no nanaramaso ny privatizasiona [famarotana ho an'ny tsy miankina ny orinasam-panjakana] sy ny famarotana ireo orinasam-panjakana an-jatony ratsy tantana sy tsy nahazoana tombombarotra.
Ireto avy ireo kandidà ho filoham-pirenena hafa mila arahi-maso:
Oby Ezekwesili [Sary avy amin'ny fanentanan'ny mpikarakara ho fitaovan'ny media]
Ezekwesili, ny kandidà vehivavy tokana lehibe mifaninana amin'ity taona ity, niasa ho minisitry ny harena an-kibon'ny tany mivaingana ary avy eo minisitry ny fanabeazana tamin'ny fitondran'i Olusegun Obasanjo tamin'ny taona 1999 ka hatramin'ny taona 2007. Efa filoha lefitry ny Banky Mondialy sampana Afrika ihany koa izy nanomboka ny Mey 2007 ka hatramin'ny Mey 2012. Lohalaharana i Ezekwesili tamin'ny antso hanavotana ireo zazavavy mpianatra miisa 200 nalain'ny vondrona mitam-piadiana islamika Boko Haram tamin'ny taona 2014. Mpiara-manorina ny hetsika #BringBackOurGirls (BBOG) ihany koa izy. Izy ihany koa no mpitondra faneva ny Allied Congress Party ao Nizeria.
Kingsley Moghalu [Sary avy amin'ny tranonkalam-panentanana].
Mpampianatra fihariana iraisampirenena sy ny politikam-panjakana ao amin'ny Sekolin'ny Lalàna sy ny Diplaomasia Fletcher ao amin'ny Oniversite Tufts ao Massachusetts, Etazonia i Moghalu. Efa niasa tao amin'ny Firenena Mikambana hatramin'ny taona 1992 ka hatramin'ny taona 2008 i Moghalu. Governora lefitry ny Banky Foiben'i Nizeria izy tamin'ny taona 2009 ka hatramin'ny taona 2014, ary tamin'izany no “nitarihany fanavaozana lehibe tamin'ny rafitry ny fanaovana banky Nizeriana taorian'ny krizy ara-bola manerantany.” Izy no kandidàn'ny Antoko Tanora Liam-pandrosoana (Young Progressive Party).
Omoyele Sowore [Pikantsary avy amin'ny antsafa CNBCAfrica, 13 Des 2018].
Sowore no mpanorina sy mpamoaka ny SaharaReporters (SR), gazety an-tserasera mpanao fanadihadiana. Ny SR dia nofariparitana ho Wikileaks an'i Afrika. Mihazakazaka eo ambany fanevan'ny Kongresin'ny Hetsika Afrikana (African Action Congress) izy.
Ho an'ny hoavin'i Nizeria no hanaovana hazakazaka
Buhari sy Abubakar no mpifaninana lehibe amin'ity hazakazaka ity. Hita hatrany eo amin'ny kianja politika ao Nizeria ireo lehilahy ireo. Etsy andaniny, ry Ezekwesili, Moghalu, Sowore, ireo “hery fahatelo”, no vondron'olona sambany miditra eo amin'ny sehatra ara-politika.
Buhari hihazakazaka amin'ny “tombony” azon'ny fitondrana notarihany nandritra ny telo taona farany ary tsy maintsy miady amin'ny zavamisy fa i Nizeria dia nampidirina ho renivohitry ny fahantrana eto amin'izao tontolo izao [Firenena lehibe anjakan'ny…]. Nofariparitan'ny gazety The Punch ho “tsy mbola nisy toy izany” ny “fanendrena mpiray paroasy” nataon'i Buhari ka nampisara-bazana lalina ny firenena. Hita ho manavakavaka sy manasazy ny ady amin'ny kolikoly. Ny hetsika vao haingana niezahana hanesorana ny Lehiben'ny Fitsarana ao amin'ny Federasiona — manakaiky dia akaiky ny fifidianana filoham-pirenena — dia fariparitan'ny Fikambanan'ny mpisolovava nizeriana ho “kisarin'ny fanafihana tsy mitsahatra amin'ireo mpitarika ny rantsana mahaleotenan'ny governemanta” ataon'ny fitondran'i Buhari.
Abubakar, etsy ankilan'izany, mitondra ny “tombony” azon'ny “mpihary ahazoam-bola haingana betsaka”. Na izany aza, ho sarotra ny asany raha jerena ny fahefan'ny mpifaninana aminy mitondra amin'izao.
Na iza na iza mandresy amin'ny fifidianana amin'ny taona 2019 dia hiatrika fanamby goavana tahaka ny fanamafisana ny toekarena, ny filaminana anatiny, fandrafetana indray ny fahefana ary fitsinjaram-pahefana, ary ny politika ara-pivavahana sy ara-poko.